NguYeremiya 23 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Yeha ke, abalusiabalusi abatshabalalisa bachithachithe umhlambiumhlambi wedlelo lam! utshoutsho uYehova.
2 Ngako oko utshoutsho uYehova, uThixouThixo kaSirayeli, ngabalusi abo balusa abantu bam, ukuthi, Niwuchithachithile umhlambiumhlambi wam, nawubhebhetha, anawuvelela; yabonani, ndiya kunivelela ngenxa yobubi beentlondi zenu; utshoutsho uYehova.
4 ndiwamisele abalusiabalusi bawaluse, angabi soyika, angaqhiphuki umbilini, kungabikho ulahlekayo; utshoutsho uYehova.
5 Yabonani, iyeza imihla, utshoutsho uYehova, endiya kummisela uDavide iHlumelo elililungisa, libe nguKumkani ongukumkani, enze yena ngengqiqo, enze okusesikweni nobulungisa ehlabathini.
6 Ngemihla yakhe uya kusindiswa uYudauYuda, uSirayeli ahlale ekholosile; negama lakhe, aya kubizwa ngalo, leli lokuba, UYehova-ububulungisa-bethu.
7 Ngako oko, yabonani, iyeza imihla, utshoutsho uYehova, abangasayi kuba sathi, Ehleli nje uYehova, owanyusa oonyanaoonyana bakaSirayeli ezweni lamaYiputa;
8 baya kuthi, Ehleli nje uYehova, owayinyusayo, owayizisayo imbewuimbewu yendlu yakwaSirayeli, ivela ezweni lasentla, nasemazweni onke endabagxothela kuwo; bahlale emhlabeni wabo.
9 Ngokusingisele kubaprofeti: Yaphukile intliziyointliziyo yam phakathi kwam, athe fehlefehle onke amathamboamathambo am. Ndisuke ndaba njengendoda enxilayo, njengomfo oweyiswe yiwayini; ngenxa kaYehova, nangenxa yamazwi akhe angcwele.
10 Ngokuba ilizweilizwe lizele ngabakrexezi, ngokuba ngenxa yentshwabulo ilizweilizwe lenza isijwiliisijwili; omile amakriwa entlango; usuke wambi umkhondo wabo, ubugorha babo abulunganga.
11 Ngokuba umprofetiumprofeti kwanombingeleli ngabenzi bobubi; ndizifumene nasendlwini yam izinto zabo ezimbi; utshoutsho uYehova.
12 Ngako oko indlelaindlela yabo kubo iya kuba njengeendawo ezibuthelezi esithokothokweni; baya kuqhutywa, bawe khona; ngokuba ndibazisela ububiububi, umnyaka wokuvelelwa kwabo; utshoutsho uYehova.
14 Ke kubaprofeti baseYerusalem ndibone into ebanga amanwele: ukukrexeza, nokuhamba ebuxokini, bomeleze izandlaizandla zabenzi bobubi, kungabuyi mntu ebubini bakhe. Bonke bephela banjengeSodom kum, nabemi bakhona banjengeGomora.
15 Ngako oko utshoutsho uYehova wemikhosi, ngokusingisele kubaprofeti, ukuthi, Yabonani, ndobadlisa umhlonyaneumhlonyane, ndibaseze inyongoinyongo; ngokuba kubaprofeti baseYerusalem kuphuma okungendawo, kuye kulo lonke ilizweilizwe.
16 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofetiabaprofeti abaniprofetelayo; banenzela into engento, bathetha umbonoumbono wentliziyo yabo, ongaphumiyo emlonyeni kaYehova.
19 Yabonani, umoya ovuthuzayo kaYehova, uphume ubushushuubushushu, umoya ovuthuzayo osisaqhwithi, uya kuqhwithela entlokweni yabangendawo.
20 Awuyi kubuya umsindoumsindo kaYehova, ade awenze, ade ayimise iminkqangiyelo yentliziyo yakhe; ekupheleni kwemihla nokugqala nikuqonde oko.
21 Andibathumanga abaprofetiabaprofeti abo, kugidime bona; andithethanga kubo, kanti kuprofete bona.
23 NdinguThixo wakufuphi na? utshoutsho uYehova, ndingabi nguThixonguThixo wakude na?
24 Wosithela na umntu ezintsithelweni, ndingamboni na? utshoutsho uYehova. Andizalise amazuluamazulu nehlabathi na mna? utshoutsho uYehova.
25 Ndikuvile abakuthethayo abaprofetiabaprofeti, abaprofeta ubuxoki egameni lam, besithi, Ndiphuphile, ndiphuphile.
26 Koda kube nini na kuyile nto entliziyweni yabaprofeti abaprofeta ubuxoki, abaprofetiabaprofeti benkohliso yentliziyo yabo?
27 Bacinga ngokubalibazisa na abantu bam, balilibale igamaigama lam ngamaphupha abo, abawalawulayo elowo kummelwane wakhe, njengoko ooyise balilibalayo igamaigama lam ngoBhahali?
28 UmprofetiUmprofeti onephupha makalawule iphuphaiphupha; onelizwi lam makathethe ilizwi lam enyanisile. Yintoni na enomququ nengqolowa? utshoutsho uYehova.
29 Alinjengomlilo na ilizwi lam? utshoutsho uYehova; nanjengesando esihlekeza ingxondorha?
30 Ngako oko yabonani, ndichasene nabaprofeti, utshoutsho uYehova, abawebayo amazwi am elowo kummelwane wakhe.
31 Yabonani, ndichasene nabaprofeti, utshoutsho uYehova, abathabatha ulwimiulwimi lwabo, bathi, utshoutsho.
32 Yabonani, ndichasene nabaprofeti abaprofeta amaphuphaamaphupha abuxoki, utshoutsho uYehova, bawalawule, babalahlekise abantu bam ngobuxoki babo, nangokugasa kwabo, endingabawiselanga methetho, abangabancediyo nokubanceda aba bantu: utshoutsho uYehova.
33 Ke kaloku, xa bathe bakubuza aba bantu, nokuba ngumprofeti, nokuba ngumbingeleli, besithi, Siyintoni na isihlabo sikaYehova? wobaxelela into esiyiyo isihlabo, sithi, Ndiya kunilahla, utshoutsho uYehova.
34 UmprofetiUmprofeti, nombingeleli, nabantu, abaya kuthi, Isihlabo sikaYehova: ndiya kumvelela loo mntu nendlu yakhe.
35 Yitshoni elowo kummelwane wakhe, elowo kumzalwana wakhe, ukuthi, Utheni na ukuphendulaukuphendula uYehova? utheni na ukuthethaukuthetha uYehova?
36 Ke sona isihlabo sikaYehova ze ningabi sasikhankanya; ngokuba liya kuba sisihlabo kwindoda ilizwi layo, niwajikile nje amazwi kaThixo ophilileyo, uYehova wemikhosi, uThixouThixo wethu.
37 Wotsho kumprofeti ukuthi, Utheni na uYehova ukukuphendula? utheni na uYehova ukuthethaukuthetha?
38 Ke ukuba nithi, Isihlabo sikaYehova: ngako oko utshoutsho uYehova ukuthi, Ngenxa yokuthetha kwenu elo lizwi lokuthi, Isihlabo sikaYehova, kanti ndithumele kuni ukuthi, Ize ningatsho ukuthi, Isihlabo sikaYehova:
40 ndibeke phezu kwenu isingcikivo esingunaphakade, ihlazoihlazo elingunaphakade, elingenakulityalwa.
IGenesis 13:13, 19:24, 25
IEksodus 9:26, 32:34
IDuteronomi 8:11, 14, 18, 18:20, 29:18, 30:3, 33:28
2 Samuweli 23:3
1 Kumkani 18:19, 20, 22:11, 14, 16
2 Kumkani 23:27
2 yeziKronike 6:18, 18:5
Umsebenzi 21:22, 22:13
IiNdumiso 35:6, 45:5, 85:9, 99:4, 139:7, 8
ImiZekeliso 1:27, 4:19
UIsaya 1:10, 3:8, 4:2, 9:5, 6, 11:1, 11, 14:24, 21:10, 32:1, 18, 33:5, 40:13, 43:5, 6, 45:24, 52:13
NguYeremiya 2:8, 32, 3:15, 4:11, 5:7, 8, 12, 14, 30, 6:13, 30, 7:15, 24, 30, 8:12, 9:2, 14, 10:10, 21, 11:15, 23, 12:4, 13:16, 14:13, 14, 16:14, 15, 17, 17:10, 20:11, 22:22, 23:13, 32, 25:31, 32, 34, 28:15, 17, ...29:8, 9, 14, 21, 23, 30:10, 23, 24, 31:8, 23, 32:31, 37, 33:15, 16, 36:16, 42:4, 48:44, 49:10, 50:6, 19
UHezekile 12:21, 13:3, 13, 22, 16:52, 17:22, 21:10, 22:25, 34:1, 11, 16, 25, 27, 36:11, 35, 37:21, 44:10
UHoseya 4:11, 12
UMika 1:5, 2:12, 3:11, 4:4, 5:3, 7:15
UZefaniya 3:3, 4, 13, 20
UZekariya 1:6, 3:8, 10:3, 11:15, 14:11
UMateyu 7:15, 12:36, 22:42
NguLuka 1:32, 70, 4:32
NguYohane 10:1, 8
Izenzo zaBapostile 1:6, 17:27, 20:29
KwabaseRoma 1:3, 11:34
Hebhere 1:8, 4:12, 13, 7:2
2 Petros 2:1, 12